Dhacdo Naxdin Leh: Wiil Dilay Nin Masaafeystay Hooyadiis !!! – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dhacdo Naxdin Leh: Wiil Dilay Nin Masaafeystay Hooyadiis !!!
Warar kala duwan ayaa laga helayaa dhacdo dad badan ka yaabisay oo ka dhacday Koofurta Mudug.
Dhacdadan ayaa ka dhacday deegaanka Laanbaar oo dhaca duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug dhanka maamul gobaleedka Galmudug.
Marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Dhoore waxaana uu kamid ahaa odoyaasha deegaankaasi, goobjooge ayaana Idaacada Simba u sheegay dilkan inuu dhacay kadib markii uu ninka dilka geystay ka carooday adeerkiis qabay hooyadii oo markii hore masaafeystay.
Ninka dilka u geystay adeerkiis ayaa qaab yaab leh u dilay odayga qabay Hooyadiis, kadib markii uu hooyadiis u sheegay iney u balamiso adeerkiis qaab Martiqaad ahaan, markii uu yimid guriga adeerka sidaasi uu ku sababsaday inuu dilo maamada uu qabay wiilkeeda uu adeer u ahaa.
Taliye Ku Xigeenka Booliska Gobalka Galmudug Maxmuud Cilmi Gulaafe oo la hadlay Simba aya xaqiijiyay dhacdo naxdinta leh oo ka dhacday xalay duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kadib markii Wiil dil u geystay adeerkii qabay hooyadii oo markii hore masaafeystay, inkastoo uu ka gaabsaday dhacdadan inuu faah faahinta rasmiga ka bixiyo Ku Xigeenka Booliska Galmudug.
Dhageyso: Codka Taliye Ku Xigeenka Booliska Gobalka Galmudug